IBC2019 ၏ထင်ဟပ် | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာ Delivery » IBC2019 ၏ရောင်ပြန်ဟပ်
Jon Finegold, CMO, Signiant အားဖြင့်
အဆိုပါမီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းအသွင်ပြောင်းခြင်းနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုတစ်ခုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကာလအတွက်ဖြစ်ပြီး, Signiant ကအလယ်၌ဖြစ်စိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်နေရာမှာသူတို့သည်ဤတာပေါ့ဘယ်မှာကျနော်တို့အဖွဲ့အစည်းများ, စျေးသည်၏ကျယ်ပြန့်နှင့်အတူစကားပြောဆိုရန်အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်နှင့် M & E ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဘယ်မှာခေါင်းဆောင်များပိုကောင်းနားလည်ရန်ထင်ဘယ်မှာယခုနှစ် IBC ညီလာခံမှာထက်ပိုပြီးသိသာစွမ်းအင်, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူတို့ခဲ့သည် လိုအပ်ပါဘူး။
အခုတော့ rearview မှန် IBC2019 အတူကျွန်ုပ်တို့လေ့လာသင်ယူပြီးပြီအရာအားလုံးကိုအပေါ်ထင်ဟပ်နဲ့ Jon Finegold ပါတယ်, Signiant ရဲ့ CMO, ညီလာခံကနေသူ့အတွေ့အကြုံကိုဝေမျှဖို့အချိန်ကိုယူထားပြီး, ကြှနျုပျတို့ 2020 ဆီသို့ကောက်ခံအဖြစ်ဘယ်လိုကြောင့် Signiant ကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါ, ။
ဒီနှစ် IBC သို့ Going, သင်သည်အဘယ်သို့ပြီးမြောက်ရန်ရှာနေကြသလဲ Signiant အကြောင်းကိုသင်ဘာကိုမီးမောင်းထိုးပြချင်ခဲ့တာလဲ
မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမာခံဈေးကွက်သည်နှင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီအဖြစ်, IBC နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုအရေးပါသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးမားဆုံးရည်မှန်းချက်လုပ်ငန်းကိုဖြတ်ပြီးသွားမယ့်အဘယ်အရာကိုသင်ယူကျနော်တို့မြင်နေပါတယ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့် ပတ်သက်. အသိအမြင်မျှဝေရိုးရှင်းစွာစျေးကွက်နှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အမြဲဖြစ်ပါသည် ... ထိုသင်တန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းအသစ်စွမ်းရည်ကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးအကျယ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခြေရာကိုမကြာခဏခေတ်ရေစီးကြောင်းသို့အစောပိုင်းထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းအစစ်အမှန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစိန်ခေါ်မှုများကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားနေကတုတ်ကျင်းတွေထဲက၌နေသောဖောက်သည်များနှင့်အတူရှိသူများထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ ကျနော်တို့မြင်နေပါတယ်တစ်ခုမှာလမ်းကြောင်းသစ်အလွန်အမင်းအထူးပြုန်ဆောင်မှုကိုဆက်ကပ်ကြောင်းသေးငယ်ပေးသွင်းသူများများစွာနှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံနှင့်ပိုပြီးအကြောင်းအရာဖြန့်ဝေလျက်ရှိသည်အဖြစ်ကျနော်တို့ပြည်တွင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးအတွက်အထူးသဖြင့်ပေါက်ကွဲကြီးထွားမြင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ပိုပိုပြီးနှင့်အတူလက်ဝါးကပ်တိုင်ကုမ္ပဏီပူးပေါင်းတစ်ခုပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပါတယ် ပိုပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြန့်ဖြူးလိုင်းများရန်။
IBC မှာဒီနှစ်မှာတော့ကျွန်တော့်ကိုကူညီရနျကြှနျုပျတို့၏ဂျက်ထုတ်ကုန်အပေါ်အချို့သောသစ်ကိုစွမ်းရည်မိတ်ဆက်ပေးသည်။ ဂျက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတည်နေရာကိုဖြတ်ပြီးသည့်စနစ်-to-system ကိုဖိုင်လွှဲပြောင်းအလိုအလျောက်ရန်လွယ်ကူစေသည်အသစ်တစ်ခု SaaS ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ IBC မှာမိတ်ဆက်အသစ်စွမ်းရည် set-အထိကုမ္ပဏီများကများအကြားလွှဲပြောင်းအလုပ်အကိုင်များကြောင့်အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူပြီးပိုလုံခြုံပါစေ။ ပိုပြီး intercompany ပူးပေါင်းမီဒီယာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဖြစ်လာသကဲ့သို့, ဂျက်ဤစွမ်းရည်ကုမ္ပဏီများမှခေတ်ရဲ့သွက်လက်နှင့်စျေးကွက်မှတုံ့ပြန်မှုရှိနေဆဲကူညီပေးပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မီဒီယာ Shuttle ထုတ်ကုန်ရှည်လျားပြည်သူများအကြားပူးပေါင်းအတွက်အသုံးပြုထားပြီးဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကလက်ဝါးကပ်တိုင်ကုမ္ပဏီ Workflows အလိုအလျောက်အတွက်ဂျက်နှင့်အတူသည်မည်မျှလွယ်ကူသောသရုပ်ပြအဖြစ် buzz အများကြီးယခုနှစ် Signiant တဲ၌ရှိ၏။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က (2018) ရဲရင့်တောင်းဆိုမှုများနှင့် buzz စာရေးနှင့်အတူမိုဃ်းတိမ်သည်အကြောင်းကိုဟောပြောပွဲတွေအများကြီးရှိခဲ့သည်။ အမှန်တကယ်မိုဃ်းတိမ်အလုပ်ကိုအောင်အကြောင်းအများကြီးပိုပြီးစကားများသောရှိခဲ့သည်တူသောဒီနှစ် (2019) ကသလိုပဲ။ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာဒီနှစ်စကားဝိုင်းကိုအသေးစိတ်ကိုန်းကျင်ကိုပိုပြီးကြီးနှင့်။ ရေနွေးငွေ့ကိုဆုံးရှုံး, ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်, ဒါပေမယ့်တစ်စပ်သောမိုဃ်းတိမ်ကိုကမ်ဘာပျေါတှငျနထေိုငျ၏စိန်ခေါ်မှုများများ၏လက်တွေ့ဘဝထဲမှာ setting နေကြသည်မဟုတ် '' ကအားလုံးကိုအလုပ်လုပ်။ ' ကုမ္ပဏီများအရေးယူမှုမှဆွေးနွေးချက်အနေဖြင့်ပြောင်းရွေ့ခဲ့ကြပြီး, အကောင်အထည်ဖော်ရေးစိန်ခေါ်မှုများအားဖြင့်ပြုပြင်မျိုးစုံသောမိုဃ်းတိမ်ရောင်းချသူနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်ဘောဂဗေဒနားလည်နှင့်ထိုကဲ့သို့သော Egress အခကြေးငွေအဖြစ်အသစ်သောဒိုင်းနမစ်သွားလာရန်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ သူများသည်ပြောဆိုမှုများစိတ်ဝင်စားဖို့တို့ Signiant ၎င်း၏အားလုံးကောင်းသောသတင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းတစ်စပ်-မိုဃ်းတိမ်သည်, Multi-မိုဃ်းတိမ်သည်ကမ္ဘာ၏စိတ္တဇရှုပ်ထွေးကူညီရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ပါ။
ကမ္ဘာတစ်လွှား OTT / လွှန်ဆောင်မှုများ၏ပေါက်ကွဲသံထက်ပိုစားသုံးသူပိုမိုအကြောင်းအရာရောက်စေဖို့အလွန်ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းနှင့်အတူစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်အသစ်သောနယ်မြေအတူပါလာသည်ဟုစိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ ဒါဟာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ကိုဖြတ်ပြီးပိုပြီးပုံစံများပိုမိုဒေသခံစည်းမျဉ်းအပြောင်းအလဲများပေါ်ထွက်လာနှင့်ပိုပြီးရှုပ်ထွေးဆိုလိုသည်။ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာကောင်းသောအကြောင်းပြချက်ခိုင်ခံ့သော်လည်းပိုပြီးနယ်စပ်ကိုဖြတ်ပြီးကပိုပစ္စည်းများမှပိုပြီးအကြောင်းအရာ၏ဂတိအပေါ်ကယ်နှုတ်တော်မူဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းကိုဆွေးနွေးမှုအများကြီးရှိခဲ့သည်။
သငျသညျ Signiant လက်ရှိစက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်းနေရာချထား? တွေ့မြင်ကြဘူးဘယ်မှာ IBC မှာသင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံအပေါ် အခြေခံ. ဘယ်လို Signiant ရှေ့ဆက်ရွေ့လျားအကျိုးသက်ရောက်စေမယ့်သလဲ?
ကျနော်တို့ဈေးကွက်ထဲမှာ Signiant ရဲ့အနေအထားနှင့်ပတ်သက်ပြီးအစဉ်အဆက်အဖြစ်အီရန် IBC ထားခဲ့ပါ။ 2018 ကျွန်တော်တို့ကိုမီဒီယာနည်းပညာအတွက်အလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားလာကုမ္ပဏီတွေရဲ့တဦးတည်းလုပ်ကူညီပေးနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ SaaS စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် 40 +% ကြီးထွားနှင့်အတူ Signiant များအတွက်ကြီးမားသောဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ 2019 အခြားအားကောင်းတဲ့တစ်နှစ်ဖြစ်ကြည့်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်နှင့် IBC မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ SaaS ပလက်ဖောင်းပတ်လည်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်အခြေခံကျနော်တို့ကောင်းစွာ 2020 သို့နှင့်ကျော်လွန်ပြီး positioned ပါတယ်။ ပိုပြီးကြီးမားတဲ့မီဒီယာလုပ်ငန်းတွေ SaaS မူတည်ပြီးနှင့်စပ်-မိုဃ်းတိမ်ကိုကမ်ဘာပျေါတှငျနထေိုငျဆက်လက်ကြည့်ရှုသည့်အတိုင်း Signiant ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ပလက်ဖောင်းတစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်နေဖို့ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။
သငျသညျ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်စုံတွဲတစ်တွဲစာကြောင်းများအတွက် 2020 က M & E ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေတက် Sum ခဲ့လျှင်သင် IBC မှာသင်ယူရာပေါ်အခြေခံပြီး, သငျသညျအဘယျသို့ဆိုသညျကားမလဲ
အတော်လေးရိုးရှင်းစွာ, မီဒီယာကုမ္ပဏီများအတွက်စိန်ခေါ်မှုကပိုသည်။ ပိုပြီးဒေသများတွင်ပိုမိုပလက်ဖောင်းတစ်လျှောက်ပိုပြီးဖန်သားပြင်ပိုမိုအကြောင်းအရာပို့ဆောင်စားသုံးသူတောင်းဆိုနေကြပါတယ်အရာဖြစ်တယ်။ ဒါကပိုပြီးပူးပေါင်းပိုဖိုင်ကိုလှုပ်ရှားမှုနှင့်ပိုပြီးလုံခြုံရေးစိန်ခေါ်မှုများကိုဆိုလိုသည်နှင့် Signiant များအတွက်ကောင်းကျိုးအပေါင်းတို့ tailwind ပါပဲ။
CES2017 ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana IBC မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး MStar OTT SoftAtHome SoftAtHome, MStar, CES2017 စာတန်းထိုး စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC 2019-10-05
ယခင်: Clear ကို-Com / FreeSpeak Edge တင်ပြ NAB Show ကို New York မြို့မှာပွဲဦးထွက်တော်မူမည်